Wararkii ugu dambeeyay Khasaaraha Qaraxyadii nawaaxiga Garoonka Diyaaradaha (Sawirro) – STAR FM SOMALIA
Qaraxa hore oo ahaa gaari kuwa xamuulka oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa ka dhacay bartamaha wadada u dhaxeysa iridka laga galo Xalane iyo albaabka garoonka diyaaradaha.
Wararka qaar ayaa sheegaya in gaariga inta uusan qarxin la rasaaseeyay, isla markaana taayarada laga banjiriyay, kadib markii uu xoog ku soo maray koontaroolka hore ee Madina Gate.
Qaraxa labaad ayaa ahaa gaari yar oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay, waxaana markiiba rasaaseeyay ciidamada, kadibna waxaa uu ku qarxay agagaarka Koontarool ay Ciidamada Nabadsugida wado ka timaada dhanka Isgoyska Dan-wadaagta.
Taliyaha Booliska Gobolka Banaadir Bishaar Cabdi Geeddi ayaa sheegay in qaraxyada ay ahaayeen labo baabuur, isagoo xusay in 13 ruux ay ku dhinteen.
Sidoo kale Afhayeenka Gobolka Banaadir C/fataax Cumar Xalane ayaa sheegay in qaraxan la doonayay in lala bartilmaameedsado Xafiisyada Hey’addaha UN-ka ee ku yaala nawaaxiga garoonka diyaaradaha.
Ciidamada ku dhintay qaraxa ayaa ahaa kuwo ilaalada Qaramada Midoobey ee Soomaalida ah, waxaana halka qaraxa ka dhacay uu ku abaarnaa xarunta Mine Action ku leedahay agagaarka Garoonka Diyaaradaha Muqdisho.
Al-Shabaab ayaa sheegatay inay weerarka ku dishay illa tobaneeyo ka tirsan Ciidamada AMISOM, hase ahaatee Afhayeenka Ciidamada AMISOM Joe Kibet oo la hadlay Radio France ayaa sheegay in aanu wax khasaare ah soo gaarin Ciidamadooda.
Shabaab oo sheegtay 27 Askari inay ku dileen Qaraxyada Ismiidaaminta ee Muqdisho ka dhacay